भ्रष्टाचार आरोपमा भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पक्राउ | | MeroKhabarSathi
अस्ताए वामपन्थी नेता काजीबा, प्रचण्ड द्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त
कोरोना विरुद्धको खोप बुधबारदेखि लगाइने
सरकारले जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक करारमा नियुक्त गर्ने
चितवनमा २ स्थानमा शकांस्पद वस्तु फेला, एउटा ट्रक तोडफोड
चितवनकाे २ स्थानमा शकांस्पद वस्तु फेला
भोलि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नेपाल बन्द
हाकिमचोकमा खुल्यो ब्लु ल्याडर विल्डर एण्ड सप्लायर्स
३८ जना विद्यार्थीहरुले पाए सुईटर र शैक्षिक सामाग्री
भरतपुर अस्पतालमा आँखा रोगको उपचार सेवा शुरु
बाग्मती प्रदेशका पौष महिनाको सर्वाेत्कृष्ठ प्रहरीमा देवेन्द्र बहादुर शाह
भ्रष्टाचार आरोपमा भारतका…
भ्रष्टाचार आरोपमा भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पक्राउ
भ्रष्टाचार आरोपमा भारतका पूर्व अर्थमन्त्री पी. चितम्बरम पक्राउ परेका छन् । चितम्बरमलाई उनकै घरबाट केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीबीआई)को टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराइने छ । उनलाई १४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिने तयारी छ । आईएनएक्स मिडियासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका अभियुक्त चितम्बरमले अगि्रम जमानतको याचिका दिल्ली हाई कोर्टसमक्ष गरेका थिए, तर त्यो खारेज भएपछि सीबीआईले पक्रेको हो । मिडिया कम्पनी आईएनएक्सलाई फाइदा हुने गरी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने विभाग फरेन इन्भेष्टमेन्ट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी)मार्फत् अनियमितता गरेको आरोप चितम्बरमलाई लागेको छ । उक्त मिडिया कम्पनीलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति दिँदा चितम्बरम अर्थमन्त्री थिए । मंगलबारदेखि उनी सम्पर्कमा थिएनन् । तर बुधबार साँझ स्थानीय समयअनुसार सवा आठ बजे कांग्रेस कार्यालयमा पुगेर उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप सही नभएको दाबी गरे । उनले आफू नभागेको बरु आफ्नै हितको रक्षाका लागि कानुनको शरणमा गएको पनि बताएका थिए । यद्यपि उनको पत्रकार सम्मेलनमा सीबीआईको टोली पुगे पनि त्यहाँबाट पक्राउ गरेन । पत्रकार सम्मेलनपछि उनी जोरबागस्थित आफ्नो घर फर्किएका थिए । उनी घर पुगेको केही मिनेटमै सीबीआईको टोली पनि त्यहाँ पुग्यो । तर, चितम्बरमको घरको ढोका खुलेन । टेलिभजन च्यानलहरुबाट प्रसारण गरिएको भिडियोमा ढोका फोडेर सीबीआईको टोली घरभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसपछि सुरक्षाका लागि दिल्ली प्रहरीलाई पनि बोलाइयो । केहीबेरमा चितम्बरमका कार्यकर्ताहरु घरबाहिर भेला भएर सरकार र प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे ।
यसअघि सीबीआईको टोली मंगलबारै उनको घरमा पुगेको थियो, तर उनी फेला नपरेपछि पूर्जी छाडेर हिँडेको थियो । सीबीआईले भनेको थियो, हामी चितम्बरमलाई पक्राउ गर्न खोजिरहेका छौं, तर उनी फेला परिरहेका छैनन् । जबकी कांग्रेस कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा सीबीआईको टोली पनि त्यहीँ थियो तर गिरफ्तार गरेन । चितम्बरम घर आएपछि मात्र सीबीआईले नियन्त्रणमा लियो र सीबीआई मुख्यालयमा लगियो । यस कार्यलाई ‘सीबीआईको भयंकर नाटक’ भनेर मिडियाहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आज सिङ्गापुर जाँदै
पत्रकार पुडासैनी मृत्‍यु प्रकरण:निष्पक्ष छानबिन गर्न भरतपुर महानगरपालिकाको आग्रह
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट मैदान बनाउन दिएको जग्गाविरुद्ध मुद्दा
चितवनमा १३२ केभी क्षमताको विद्युत सवस्टेशन निर्माण शुरु
नेविसंघले जलायो पोखरा महानगरपालिकाको गाडी,गाडी जलेर काम नलाग्ने अवस्थामा
विश्व सिमसार दिवसमा बाटुली पोखरी काव्य उत्सवह
क्रिकेट रंगशाला निर्माणको घोषणा भएपछि पहिलो पटक चितवन आएका धुर्मुस सुन्तलीलाई चितवनमा भव्य स्वागत
चितवनमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नेपालको गौरब
© 2019, MeroKhabarSathi. All rights reserved